Izicelo zeCannabis Transporter zamalayisense e-Illinois
Ilayisense ye-Illinois canannis Transporter
Uthini umthetho omusha wase-Illinois mayelana nezinhlangano zokuhamba zeCannabis ngaphakathi kombuso?
Ilayisense Ye-canannis Transporter
Izinhlangano zokuhamba zeCannabis zinikezwe umsebenzi wokuphatha insangu noma imikhiqizo ye-cannabis ngaphakathi kwe-Illinois. Lezi zinhlangano ziyadingeka ukuthutha insangu noma imikhiqizo ethengiswa i-cannabis esikhungweni sokulima, umlimi wezandla, inhlangano yabahlukumezi, inhlangano yokusabalalisa, indawo yokuhlola, noma egunyazwe ngenye indlela.
Kulesi sihloko, sizokhuluma ngakho konke odinga ukukwazi maqondana nezinhlangano zeCannabis zokuThutha e-Illinois. Ukusuka ekuthweni kwamalayisense, izidingo, kanye nezinqatselo zabathutha ekuvuseleleni kwamalayisense.
Izinhlangano ezithutha amaCannabis e-Illinois zidinga amalayisense ukuze zisebenze. Lawa malayisense kumele akhishwe nguMnyango wezezimali ungakashayi uJulayi 1, 2020. UMnyango uzokwenza ukuthi lolu hlelo lutholakale kusuka ngoJanuwari 7, 2020, futhi zonke izinhlangano ezidinga amalayisense zizoba nazo kuze kube uMashi 15, 2020, ukwenza zona. izicelo.
Ngemuva kwalokho izinhlangano zizoba phakathi kukaJanuwari 7 noMashi 15 njalo ngonyaka ukwenza izicelo zazo. Futhi uma lezi zinsuku ziwa ngempelasonto noma iholide, izinhlangano zizoba kuze kufike usuku lwebhizinisi elilandelayo ezizofaka isicelo.
Izinhlangano zeCannabis zokuThutha kudingeka ukuthi zilethe amafomu ezicelo zazo zamalayisense ngogesi. Ifomu lokufaka isicelo kumele liqukathe;
Eminye imininingwane ezodingeka kulolu hlelo lokusebenza ifaka:
(1) imali yesicelo engabuyiswa engama- $ 5,000 noma, ngemuva kukaJanuwari 1, 2021, enye imali njengoba ebekwe ngumthetho nguMnyango Wezolimo, ukuthi ifakwe esiKhwameni Somthetho seCannabis;
(2) Igama lefemu yokuhambisa;
(3) Ikheli lendawo lenkampani, uma kuhlongozwa umuntu;
(4) Igama, inombolo yokuphepha kwezenhlalo, ikheli, kanye nosuku lokuzalwa kwezikhulu eziphezulu kanye namalungu ebhodi; umuntu ngamunye ngaleso sikhathi kufanele okungenani abe neminyaka engama-21;
(5) imininingwane yokuqhutshwa kokuphatha noma yokwahlulela lapho noma yiziphi izikhulu eziphezulu noma ilungu lebhodi
(i) wabekwa icala, waboshwa, wahlawuliswa, noma
(6) Imithetho kamasipala ehlongozwayo ukuphatha inkampani equkethe; uhlelo oluqondile lokugcinwa kwezincwadi, uhlelo lwabasebenzi, kanye necebo lokuphepha elivunyelwe yigatsha lamaphoyisa oMbuso nelinye elihambisana nemithetho enikezwe kulo mthetho. Izinkampani zokuhambisa kufanele futhi zenze uluhlu lwezinto ezibonakalayo lwamasonto onke.
(7) ukuqinisekiswa kokuhlola okwenziwe kumalungu efemu.
(8) Ikhophi lomthetho wamanje wendawo wokukhombisa ukubekelwa indawo ukukhombisa ifemu nayo yonke imithetho yasekhaya esungulwe.
(9) okuhlongozwayo imigomo yokuqashwa ukukhombisa ukuzibandakanya ezenzweni zabasebenzi ezinobulungiswa, futhi
(10) uma ofaka isicelo angakhombisa umuzwa noma kwezentengiso zebhizinisi ezothuthukisa amandla wezoMnotho eziNdaweni Ezithintekayo;
(11) inombolo nohlobo lwemishini inhlangano yezokuthutha ezosebenzisa ukuthutha insangu kanye nemikhiqizo ye-cannabis.
(12) ukulayisha, ukuhambisa, kanye namasu wokulayisha;
(13) incazelo yolwazi lomfakisicelo ekusabalaliseni noma ebhizinisini lezokuphepha;
(14) ubunikazi bawo wonke umuntu onenzalo yezezimali noma yokuvota ka-5% noma ngaphezulu enhlanganweni yezokuthutha etholwa yilayisense, kungaba yitrasti, inhlangano, ubambiswano, inkampani enesikweletu esinqunyelwe, noma ubunikazi obunikazi, kubandakanya igama nekheli lomuntu ngamunye; futhi
(15) noma imiphi eminye imininingwane edingwa umthetho.
UMnyango wezoLimo uzokhipha amalayisense ezinhlanganweni zeCannabis zokuThutha e-Illinois, ohlelweni lwamaphoyinti. Isikolo sizosuselwa ekutheni isicelo sinembe kangakanani futhi sihleleke kanjani, futhi nekhwalithi yezimpendulo kulwazi oludingekayo.
Inhlangano enamaphesenti angama-85 nangaphezulu futhi ehlangabezana nazo zonke izidingo zelayisense lokuhambisa izonikezwa ilayisense kungakapheli izinsuku ezingama-60 ifake isicelo.
Uma inhlangano ithola ilayisense, yonke imininingwane etholakala kwisicelo, kufaka phakathi amasu ayo, kuzoba yisimo esiyimpoqo semvume. Ukwehluleka ukuhambisana nakho kungadinga ukuthi kuthathwe izinyathelo zokuqondiswa kwezigwegwe ezingabandakanya ukukhishwa kwelayisense.
Izinhlangano ezifanele amalayisense kuzodingeka futhi zikhokhe u- $ 10,000 ngaphambi kokuthola ilayisense lawo. Le mali ifakwa esikhwameni seCannabis Regulation Fund.
Isigaba 40- 20 somthetho we-cannabis regulation kanye nesenzo sentela sithi isicelo esenziwe yiCannabis Transportation Izinhlangano e-Illinois singaphikwa uma;
(1) Uhlelo lokusebenza aluthumeli yonke impahla edingekayo
(2) Isicelo sehluleka ukulandela imithetho yendawo yokubekelwa noma izidingo zemvume
(3) Noma yiliphi ilungu lebhodi noma izikhulu eziyinhloko zephula izidingo zenhlangano
(4) Noma yiziphi izikhulu noma amalungu ebhodi enhlangano angaphansi kweminyaka engama-21
(5) Isicelo siqukethe imininingwane engamanga
(6) Umphathi omkhulu, umnikazi welayisensi, ilungu lebhodi, noma ilungu elinenzalo yezezimali noma yokuvota engu-5% noma ngaphezulu kwilayisense, unenhlamba ekufakeleni noma yiziphi izintela zentela noma akhokhe noma iyiphi imali ekweletwayo eMbusweni we-Illinois.
Izidingo Zenhlangano Yezokuhamba Nezinqubo
Bonke abathuthi abanamalayisense bayadingeka;
(1) Yiba nezinqubo zokulawula inhlangano kanye nohlelo lokuqapha yokusungula
(2) Kuthengiswa kuphela i-cannabis noma imikhiqizo efakwe i-cannabis esikhungweni sokulima, indawo yokuhlola, umlimi wezandla, inhlangano yokusabalalisa, inhlangano yabahambisi, noma egunyazwe ngenye indlela.
(3) Qopha yonke insangu edlulisiwe bese uyibeka esitsheni se-cannabis lapho uthutha
(4) Bika ukulahleka noma ukwebiwa kweziphathimandla kungakapheli amahora angama-24 ukutholakala kungaba, ngocingo, mathupha noma ngokubhala.
(5) Gcina noma ngubani ongaphansi kwama-21 ezimotweni ezihambisa insangu
Ikhadi Lokuhlonza Umenzeli Wezokuhamba
Ama-ejenti ezokuhamba kuyadingeka ukuthi abe namakhadi wokuhlonza ama-ejenti ukuze awasebenzele noma iyiphi inhlangano yezokuthutha e-Illinois.
Ikhadi lokuhlonza i-ejenti kufanele liqukathe;
(i) Igama lomenzeli
(ii) Usuku lokukhishwa nokuphelelwa yisikhathi
(iii) Inombolo kamazisi ye-alphanumeric eyingqayizivele (Kufanele ibe nezinombolo eziyi-10)
(iv) Izithombe zomnikazi wekhadi
(v) Igama elisemthethweni lenhlangano yezokuhambisa umqashi kumqashi kwi-ejenti
Mayelana nekhadi, uMnyango unikezwe igunya loku;
(1) Nquma ukuthi imiphi imininingwane ezotholakala kwifomu lesicelo
(2) Qinisekisa imininingwane leyo kwifomu lesicelo bese uvumela noma wenqaba isicelo ezinsukwini ezingama-30 ngemuva kokufaka
(3) Amakhadi omazisi wokukhipha ezinsukwini eziyi-15 ngemuva kokuvunywa
(4) Vumela ukusetshenziswa kwe-elekthronikhi kanye nokuqinisekisa kokulethwa
Umthetho udinga ukuthi abenzeli bagcine amakhadi abo wokuhlonza abonakala ngenkathi isendaweni yesikhungo sebhizinisi le-cannabis. Bayacelwa nokuthi babuyise amakhadi wokuzazisa enhlanganweni lapho inkontileka yabo yokusebenza iphelelwa yisikhathi noma inqanyulwa. Uma ikhadi elahlekile, umenzeli kufanele abike ngokushesha eMnyangweni Wamaphoyisa Esifundazwe kanye noMnyango Wezolimo.
Amasheke Wenhlangano Yezokuhamba Emuva Amasheke
Isimo sase-Illinois sidinga ukuthi amasheke angemuva enziwe kuzo zonke izikhulu ezingaba yikhulu, amalungu ebhodi, kanye nabamele inhlangano yokuhamba ngaphambi kokuba inhlangano ithumele isicelo selayisense layo lokuqala.
Lokhu kuhlolwa kuzokwenziwa nguMnyango wamaphoyisa ombuso. Ozoba ngabaphathi abakhulu, amalungu ebhodi, kanye nama-ejenti kuzodingeka banikeze iminwe yabo ukuze ihlolwe.
Izinhlangano zizodingeka ukuthi zikhokhe imali yokuhlolelwa umlando wobulelesi, ezokhokhelwa esikhwameni senkonzo yamaphoyisa kahulumeni.
Ukuvuselelwa Kwamalayisense Enhlangano Yezokuthutha kanye Namakadi Wemininingwane Yama-ejenti.
Amalayisense enhlangano yokuhambisa kanye namakhadi wokuhlonza i-ejenti azovuselelwa minyaka yonke lapho kuphela isikhathi. UMnyango wezoLimo uzonikeza izaziso ezibhaliwe noma ze-elekthronikhi zokuphelelwa yisikhathi, izinsuku ezingama-90 ngaphambi kosuku lokuphela.
Izinhlangano zeCannabis zokuThutha e-Illinois kufanele zilindele ukuthola ukuvuselelwa kwazo ezinsukwini ezingama-45 ngemuva kokwenza isicelo sokuvuselela uma;
(1) Bakhokha imali yokuvuselela engabuyiswa yama- $ 10,000 afakwe esikhwameni seCannabis Regulation Fund
(2) Ilayisensi yenhlangano ayizange ihoxiswe noma imiswe ngenxa yokwephula noma yimiphi imithetho
(3) Inhlangano isebenze ngokwezinhlelo ezibekwe njengengxenye yokusebenzisa noma izichibiyelo ezenziwe ohlelweni futhi zivunyelwe nguMnyango Wezolimo.
(4) Le nhlangano ingenise imibiko yokwehlukahluka njengoba kudingwa nguMnyango
Izinhlangano zokuhamba ezihluleka ukuvuselela amalayisense abo ngaphambi kokuphela kwezikhathi zokuphelelwa kwazo ziyekile ukwenza imisebenzi kuze kuvunyelwe imvume yazo. Noma yiziphi izinkampani eziqhubeka nokusebenza ngemuva kokuphelelwa isikhathi kwamalayisense abo zingaphansi kwenhlawulo.
Ama-ejenti anamakhadi akhe wokuhlonza aphelelwe yisikhathi nawo kulindeleke ukuthi awavuselele. Labo baphathisi abahluleka ukulandela ngeke bavunyelwe ukuthi basebenzele noma iyiphi inhlangano yezokuthutha insangu e-Illinois. Futhi uma zenza, nazo ziyohlawuliswa inhlawulo.
Izinhlangano noma abenzeli abanenkohliso ekufayeleni amafomu entela noma abakhokha imali abakweletwa yi-State of Illinois ngeke bavunyelwe ukuba namalayisense abo.
Uma ufuna ukuthola ilayisense lenhlangano yakho yezokuhamba ye-cannabis noma ama-ejenti akho, udinga ukushayela umeli we-cannabis ukuthola usizo.